UMEYA WASEMZUMBE UTHULA IDRAFT BUDGET KA 2020/2021 – Sivubela intuthuko Newspaper
Umeya waseMzumbe uKhansela Londolo Zungu wethule i draft budget yonyaka ka 2020/2021 emhlanganweni woMkhandlu obusezindlini zomkhandlu eMzumbe namhlanje mhlaka 26 March 2020. Kulomhlangano obuqashwe ngelokhozi ukuthi imigomo yokugwema ukuthelelana ngegciwane le Corona iyalandelwa.
Enkulumweni yakhe uthintile umthelela omubi ozodalwa yigciwane le Corona emnothweni. Uphinde wathinta izinto ezibalulekile ezikhalisa kakhulu abantu baseMzumbe njengemigaqo, izindlu, amanzi, amathuba emisebenzini kanye nokuthuthukiswa kosomabhizinisi baseMzumbe.
Imali isiyonke eyethulwe njenge draft budget ingu R328 million. Ukubalulile ukuthi lemali incane kakhulu uma ubheka izidingo zabantu baseMzumbe. Ithuba lokuxhumana nezinhlaka zomphakathi lizokwenziwa uma emva komhlahlandlela oyoshiwo uMongameli wezwe emva kulezinsuku eziwu 21 ze lockdown.
Uma uMkhandlu usuphasisa isabelomali sokugcina ungakapheli uJune 2020 siyobe sesifaka nemibono yomphakathi.
Eyibeka emakhanseleni uSomlomo woMkhandlu uKhansela Matho Shozi ukuthi aveze imibono yawo, amakhansela wonke ayemukelile idraft budget aphakamisa ukuthi iye ebantwini ukuze nabo babeke imibono yabo